Mas'uuliyiintii ku geeriyooday weerarkii Ismiidaaminta | KEYDMEDIA ONLINE
Mas’uuliyiintii ku geeriyooday weerarkii Ismiidaaminta
Taliyihii saldhigga booliska degmada Waaberi iyo Taliye ku xigeenkii qeybta Waliyo Cadde ayaa ku geeriyooday weerarkii ismiidaaminta ahaa ee kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen xalay saldhigga degmadaasi.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyihii saldhigga booliska degmada Waaberi Axmed Cabdullaahi Baashane (Calooleey) ayaa ka mid noqday dadkii ku geeriyooday qaraxii lala beegsaday saldhigga degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho kaasoo ay soo qaadeen kooxda Al-Shabaab.
Taliye Baashane ayaa ku sugnaa xarunta saldhigga oo bartilmaameedka kooxda weerarka fulisay uu ahaa taliyaha iyo saraakiil kale in la khaarajiyo, waxa uuna kamid ahaa taliyayaasha ugu caansan ee booliska Soomaaliyeed. waxa uu laba jeer soo noqday Taliye ku xigeen saldhigyada Waaberi iyo Wardhiigley, sidoo kale waxa uu soo noqday Taliyaha saldhigyada Wadajir iyo Cabdicasiis isagoo horraantii bishii May loo soo magacaabay taliyaha Saldhigga booliska degmada Waaberi halkaas oo caawa kooxda Al-Shabaab ay ku dileen.
Sidoo kale Gaashaanle Dhexe Cabdibaasid Maxamud Cageey oo ahaa ku xigeenka Taliayaha Qeybta Waliyoow Cadde ee Booliska Gobalka Banaadir ayaa isna kamid ahaa saraakiishii ku sugneed saldhigga xilliga uu weerarka dhacayay, waxaana dhaawac kasoo gaaray weerarka kaddib loola cararay isbitaalka isagoo ugu dambeyn u geeriyooday dhaawacaasi.
Weerarka oo ahaa mid ismiidaamin ah, inta badana ay caan ku yihiin weerarrada nuucan oo kale ah kooxda Al-Shabaab ayaa kusoo beegmaya xilli la dareemayo in ay sii yaraanayaan qaraxyada ismiidaaminta ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho.